सिंहदरबारभित्र पार्किङ अराजकताका तीन दृश्य — OnlineDabali
सिंहदरबारभित्र पार्किङ अराजकताका तीन दृश्य
Posted on March 5, 2017 by अनलाइन डबली
यो सिंहदरवार हो । देशको प्रशासनिक मुख्यालय । यहाँ नीति निर्माण बनाउने मात्र होइन कार्यान्वयन गराउने निकाय पनि हो । आफूले बनाएको नीति–नियमहरु कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन पनि यहीबाट हुन्छ ।
सिंहदरबारमा सर्वसाधारणलाई सहज प्रवेश छैन । यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, नेताहरु, मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मी, सहयोगी, अगुवा–पछुवा, कुटनीतिक निकाय, संवैधानिक निकाय, नेपाल बार एशोसिएशनबाट मान्यता प्राप्त कानुन व्यवसायी, पत्रकार र पहुँचवालाहरुलाई मात्र सहज प्रवेश छ । राज्य संचालन अगुवाहरु पनि उनिहरु नै हुन् ।
यहाँभित्र कुसीमा बस्नेहरु र वरीपरी घुम्नेहरु किन आउँछन् ? के गर्छन ? भन्ने कुरा देशको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ ।
दृश्य १ः सिंहदरबारको मुख्य गेटबाट प्रवेश गरेर सिधै अगाडि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय आउँछ । त्यसको अलि अगाडि एउटा अनुरोध पाटी छ । त्यहाँ दुई बुँदे सूचनाको पहिलो बुँदामा, ‘सिंहदरबार परिसरभित्र तोकिएको स्थान बाहेक सडक तथा फुटपाथमा जाथाभावी पार्किङ नगरौँ, सिंहदरबारभित्र आउनु हुने महानुभावहरुले फुटपाथ तथा जेब्रा क्रसिङ्कको प्रयोग गरौँ’ लेखिएको छ ।
यो सूचना पाटी नजिकै तथा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अगाडिको सडक फुटपाथमा बा.१६ च ६५९० नम्बरको भिआईपी गाडी पार्किङ गरिएको छ । त्यसको अर्को साइडको मोटरसाइकल पनि फुटपाथमै पार्किङ गरिएका छन् ।
दृश्य २ः यो शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय अगाडिको दृश्य हो । यहाँपनि सरकारी र निजी गाडीहरु सडक दायाँबायाँ लाइनै लगाएर फुटपाथमा पार्किङ गरिएका छन् । मानिसहरु हिड्ने ठाउँ नै छैन । मानिसहरु बीच सडकबाट हिड्न बाध्य छन् ।
दृश्य ३ः सिंहबारको मुख्या सडक दायाँबायाँ सरकारी र कुटनीतिक नियोगका गाडीहरु फुटपाथमै पार्किङ गरिएका छन् । यहाँ पनि मानिसहरु फुटपाथमा हिड्न नपाएर बीचबाटै हिट्न बाध्य छन् ।
सिंहदरबार बाहिर नियम मिच्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्छ तर सिंहदरबारभित्रको अराजकतालाई कसले कारवाही गर्ने होला ?
बाँकी क्याम्पसहरुमा स्ववियु चुनाव नगर्न अायोगको निर्देशन
अपडेटः दरमखोलाको पानीमाथिबाट बग्न थाल्यो, एकको मृत्यु
Posted in फोटो ग्यालरी, समाचार | Leaveareply
मेची-महाकालीका सुकुम्बासी जगाउँदै विप्लव माअाेवादी (फाेटाेफिचर)
विप्लव माअाेवादीकाे जिल्ला सम्मेनलः कैलाली र सल्यानका १३ झलक